by • • विश्लेषण • Comments (0) • 1799
आखिर, पढ्ने प्रक्रिया हुन्छ चाहिं कस्तो ? प्रचलित अवधारणा के छ भने पढ्ने प्रक्रियामा शब्दको उच्चारणले अर्थ तर्फ लैजान्छ, शब्दका अर्थहरू मिलेर उपवाक्य र वाक्यका अर्थ बन्छन् अनि वाक्य–वाक्यका अर्थहरू जोडिएर समग्र संवाद-संकथनको अर्थ निर्माण हुन्छ । यस अवधारणा अन्तर्गत के मानिन्छ भने केटाकेटीले सबैभन्दा पहिले अक्षर चिनेर शब्द र त्यसपछि वाक्य चिन्छन् । यसरी उनीहरू ‘एउटा ईंटामाथि अर्को ईंटा राखे झैं’ गरी अर्थसम्म पुग्छन् ।
यसप्रकार अनुमान गर्न या निश्चयमा पुग्न पठनसामग्रीमा दिइएको जानकारी र आफ्नो पूर्व–ज्ञान दुवैको प्रयोग आवश्यक हुन्छ । प्रवीण पाठकले यीबीच कुशलतापूर्वक सामञ्जस्य कायम गर्छ । तर कच्चा पाठकहरू या प्रायः अक्षर र शब्दहरूमा नै अल्झ्रिहेका हुन्छन् या त आफ्नो पूर्व–ज्ञानकै सेरोफेरोमा ।
कुनै पनि पाठ्यसामग्रीले आफ्नो सबै कुरा स्वयम् बुझइदिंदैन । अर्थात्, त्यसले भन्न खोजेको सबै कुरा त्यसमा निहित हुँदैन । कुनै पनि पाठ्यसामग्री बुझन पाठकले त्यस विषयसँग सम्बन्धित आफ्नो पूर्व–ज्ञानको उपयोग गर्छ; गर्नु पर्छ । पाठ्यसामग्रीमा निहित सन्देशका अपूर्तिहरूलाई पूर्ति गर्न र त्यसमा दिइएका नयाँ जानकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्न पूर्व–ज्ञानको उपयोग गरिन्छ । अर्थात्, पाठक स्वयम्ले अर्थको ‘निर्माण’ गर्छ । रेस्टुराँवाला उदाहरणमा पाठकले स्वयम् बुझछः मीना टेबुलमा होइन, टेबुलसँगैको कुर्सीमा बसिन् होला; उसले मेनुबाट खानेकुरा छानेर अर्डर गरिन् होला र उनलाई खानेकुरा ल्याएर दिने व्यक्ति त्यहाँको वेयरा थियो होला । यी कुरा उक्त पाठ्यसामग्रीमा भनिएको छैन । यी जानकारीको संयोजन पाठकले स्वयम् गर्छ ।
हुन सक्छ, कुनै विषयका बारेमा केही केटाकेटीलाई कुनै जानकारी नहोस्, केहीलाई धेरथोर जानकारी होस् अनि केहीलाई प्रशस्त जानकारी होस् । पूर्व–ज्ञानको यस अन्तरले सम्बन्धित पाठ्यसामग्रीको बुझइमा पर्याप्त अन्तर सिर्जना गर्छ । उदाहरणका लागि, अनुसन्धानका क्रममा, दोस्रो कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई—जसको पढ्ने क्षमता समान थियो— माकुराका बारेमा एउटा पाठ पढाउनुभन्दा अघि उनीहरूको पूर्व–ज्ञान जाँच्न एउटा ‘टेस्ट’ लिइयो । त्यसपछि उक्त पाठ पढाइयो र पाठ्यसामग्रीमा आधारित केही प्रश्न सोधियो । जसलाई माकुराका बारेमा पहिलेदेखि नै थाहा थियो, उनीहरूले दिएको उत्तर अरूको भन्दा राम्रो थियो । खास गरी त्यस्ता प्रश्नको उत्तर, जसमा तार्किक क्षमता चाहिन्थ्यो, त निकै नै राम्रो थियो ।
धाराप्रवाह पढ्नुको पहिलो आधार हो— शब्दहरूको पहिचान । वर्णमालामा आधारित भाषामा हिज्जे र शब्दबीच लगभग सुनिश्चित सम्बन्ध हुन्छ । पढ्न सिक्ने हरेक व्यक्तिले त्यो ‘कोड’ लाई आत्मसात् गर्नुपर्छ जसबाट हिज्जे, शब्द र तिनको अर्थका बीच सम्बन्ध स्थापित हुन सकोस् । अनुसन्धानबाट के सिद्ध भइसकेको छ भने केटाकेटीलाई पढ्न सिकाउन तपाईं शुरूमा के–कस्ता तरीका उपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराले केही फरक पर्दैन । कुरा बुझेर पढ्ने कौशलमा तिनै केटाकेटी अगाडि पुग्छन् जसले पहिलो कक्षामै शब्दहरूलाई सही किसिमले र तीव्रताका साथ चिन्न–जान्न थालेका हुन्छन् ।
कुनै शब्दलाई ‘डिकोड’ गर्नु अर्थात् त्यसको उच्चारण र अर्थ पहिचान गर्नु भनेको हिज्जे पहिचान गर्नुभन्दा निकै फरक कुरा हो । उन्नाइसौं शताब्दीदेखि नै हामीले थाहा पाइसकेका छौं— ससाना, परिचित शब्द त्यत्तिकै तीव्र गतिमा पढ्न सकिन्छन् जति तीव्र गतिमा वर्णमालाका अक्षर । कतिपय अवस्थामा त हिज्जेमा ध्यान नपुगे पनि शब्दको पहिचान भइरहेको हुन्छ । यदि, शब्द चिन्नका निम्ति हिज्जेको विश्लेषण आवश्यक शर्त हुँदो हो त यस्तो हुन सम्भव थिएन । के पनि सिद्ध भइसकेको छ भने, सार्थक सन्दर्भले शब्द र तिनको अर्थ-तात्पर्य पहिचान गर्न प्रशस्त मदत गर्छ । उदाहरणका लागि, ‘डाक्टर’ शब्द नजिकै, कतै छ भने ‘नर्स’ शब्दको पहिचान सहजै हुन्छ ।
शब्दहरूलाई तीव्र गतिले ‘डिकोड’ गर्ने क्षमता पाठकमा भएपछि मात्र उसले कुनै पनि पाठ्यसामग्रीको अर्थ निर्माणको प्रक्रियासँग तालमेल मिलाउन सक्छ । भर्खरै भनिए झैं, यदाकदा हिज्जेमा ध्यान नपुगे पनि उसले शब्दको तीव्रतासाथ र सही रूपमा पहिचान गर्छ र सही अर्थ निर्माण गर्छ । यस्तो स्थितिमा, कुशल पाठक र सामान्य पाठकबीच फरक सिर्जना गर्ने कुरा तीव्र गति हो, हिज्जेको पकड होइन । सामान्य पाठक हिज्जे र त्यसको उच्चारणको तरीकामै बढी अल्झ्रिहेको हुन्छ भने कुशल पाठक त्यसभन्दा माथि उठेर अर्थ निर्माणको स्वचालित प्रक्रियामा पुगिसकेको हुन्छ ।
कुशल पाठकमा सधैं लचिलोपन विद्यमान हुन्छ । कुनै पनि पाठ्यसामग्री पढ्नुअघि त्यो कति जटिल छ, त्यसको विषयवस्तुसँग ऊ कति परिचित छ अनि त्यसलाई पढ्नुको उद्देश्य के हो भन्नेबारे कुशल पाठक स्पष्ट-सावधान हुन्छ । त्यसै अनुसार उसको पढाइको तरीका पनि निर्धारित हुन्छ । सामान्य वा अपरिपक्व पाठकहरू भने पाठ्यसामग्रीसँग सम्बन्धित आफ्नो पूर्व–ज्ञानबारे स्वयम् बेखबर हुन्छन् । यसका साथै उनीहरू पढ्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रित गर्न सक्तैनन्, जसका कारण बुझने प्रक्रिया असफल भएको खण्डमा प्रयोग गर्न सकिने युक्तिहरूको प्रयोग पनि हुन सक्तैन ।
पढाइको प्रक्रियामा नियन्त्रणको अर्को पक्ष हो— पढ्ने क्रममा कुनै कुरा बुझ्एिन वा कठिनाइ आयो भने त्यसको सामना गर्ने उपाय तत्काल खोजिहाल्नु । कुशल पाठकले यस्तो अवस्थामा विभिन्न उपाय अपनाउने गर्छन् । एउटा उपाय हो— कुनै शब्दको अर्थ बुझ्एिन भने, अलिक बेरपछि आफैं बुझ्एिला भन्ने आशामा अगाडि पढ्दै जानु । अर्को उपाय हुन सक्छ— नबुझ्एिको वाक्य÷परिच्छेद बारम्बार पढ्नु अथवा बाह्य स्रोतहरूबाट मदत लिनु । एउटा अनुसन्धानका क्रममा दोस्रो र छैटौं कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई सोधिएको थियो— ‘पढ्दै जाँदा कुनै कुरा बुझ्एिन भने त्यसलाई बुझन तिमी के गर्छौ ?’ कुशल पाठकहरूले भनेका थिए— आफूभन्दा जान्ने व्यक्तिलाई सोध्छौं अथवा शब्दकोशमा हेर्छौं । यसो भन्नेहरू अधिकांश माथ्लो कक्षाका थिए । सामान्य वा अपरिपक्व पाठकहरूले भने त्यसवेला के गर्ने भनेर खास केही बताउन सकेनन् । यो कुरा विद्यार्थीहरूको अवलोकनबाट अरू पुष्ट भएको छ । अनुसन्धानकै सिलसिलामा चौथो कक्षाका विद्यार्थीहरूलाई एउटा कथा पढ्न दिइयो, जसमा केही कठिन शब्द थिए । अपेक्षा अनुसार नै, कुशल पाठकहरूले बुझेको शब्द कापीमा टिपे, शब्दकोशको सहयोग लिए अथवा त्यसबारे शिक्षकलाई सोधे । सामान्य पाठकहरूले भने यस्तो गरेनन् ।
प्रेरणा अर्थात् पढ्ने गहिरो इच्छा पढ्न सिक्नुको प्रवेशद्वार हो । पढ्नु स्वयंमा आनन्ददायक कार्य हो । कुशल पाठकका निम्ति मात्र होइन, धेरै हदसम्म ती केटाकेटीका लागि पनि— जो औसत अथवा त्यसभन्दा तल्लो तहमा पर्छन् । यो ‘आनन्द’ कै कारण उनीहरू पुस्तकमा डुब्न पुग्छन् । पढ्न सिकाउने प्रक्रियाको उद्देश्य बढीभन्दा बढी केटाकेटी कुशल पाठक बनून् भन्ने हुनुपर्छ । साथै यसको ध्येय आनन्दका लागि मात्र नयाँ– नयाँ पुस्तक पढ्ने बालबालिकाको संख्या बढोस् भन्ने पनि हुनुपर्छ । यसका निम्ति उनीहरूले मन पराउने पुस्तक सजिलै पाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
केटाकेटीलाई पढ्न सिकाउने प्रक्रिया प्रायः विरक्तलाग्दो र नीरस हुन्छ । पढाइका नाममा तिनलाई गर्न लगाइने गतिविधि अरुचिकर हुन्छ । एउटा अनुसन्धानमा उनीहरूलाई एक कक्षा माथिका पुस्तक पढ्न दिइएको थियो । त्यस क्रममा उनीहरूले भनेका थिए— पढ्न त मजा आइरहेको छ तर पाठका अन्त्यमा दिइएका अभ्यास-गतिविधि गर्न बिल्कुलै मन लाग्दैन । यसमा अनौठो मान्नुपर्ने कुरै छैन । केटाकेटीमा प्रेरणाको उच्च स्तर कायम राख्ने शिक्षकहरू निकै तीव्र गतिमा विविध पाठ पढाउने गर्छन् । अभ्यास-गतिविधिहरू उत्साहका साथ शुरू गराउँछन् र त्यसो गर्दा उनीहरूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुझउँछन् । यस्ता शिक्षकहरूको कक्षामा प्रशस्त काम हुन्छ र विद्यार्थी तथा शिक्षकका बीचमा पर्याप्त स्नेह तथा विश्वास हुन्छ । यसरी पढाइएका केटाकेटीले पढाइको मूल्यांकनमा औसतभन्दा माथि अंक ल्याउँछन् ।
अपरिपक्व पाठकहरू ‘पढाइ’ प्रति नकारात्मक हुन पुग्नु स्वाभाविक हो । उनीहरू यताउता पल्याकपुलुक हेरिरहन्छन्, पढाइमा ध्यान दिंदैनन्, कक्षाको प्रक्रियामा जानीबुझी बाधा खडा गर्छन्, आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दैनन् । कुनै अभ्यास वा गतिविधि गर्नुपर्दा झ्ट्टै हातखुट्टा छोडिदिन्छन् । पाठ्यांश वाचन गर्न लगाउँदा वा परीक्षा दिनुपर्ने भएमा असाध्यै चिन्तित हुन्छन् । संक्षेपमा भन्दा, उनीहरू आफूलाई असहाय महसूस गर्छन् । तिनलाई लाग्छ— म केही पनि राम्रो गर्न सक्तिनँ ।
संगीत झैं ‘पढ्नु’ पनि त्यस्तो कला होइन जसमा एकै पटकमा प्रवीणता हासिल गर्न सकियोस् । यो यस्तो कौशल हो, जो अभ्यास सँगसँगै निरन्तर परिष्कृत हुँदै जान्छ । यो प्रक्रिया त्यहीवेला शुरू भइसक्छ जब कुनै व्यक्ति पढ्ने–लेख्ने संस्कृति वा कुनै पाठ्यसामग्रीका सामु पहिलोपल्ट ‘उपस्थित’ हुन पुग्छ । सधैं पालन गर्नुपर्ने पहिलो नियम भनेको ‘पढाइ’ लाई समग्र प्रक्रियाका साथ शुरू गर्नु नै हो । पाठ्यसामग्रीमा निहित अर्थ र सन्देशलाई ग्रहण गर्न नै ‘पढ्नु’ पर्छ ।
स्पष्ट छ, ‘पढ्न’ सिक्न शुरू गर्ने बालकका सामु यस मान्यताले ठूलो समस्या खडा गरिदिन्छ । ‘पढ्न’ सिक्नुभन्दा पहिले नै उसले पढ्न थाल्नु कसरी सम्भव छ ? र, यस्तो नभई ‘पाठ्यसामग्रीमा निहित अर्थ र सन्देश’लाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता उसले कसरी आर्जन गर्न सक्छ ?
समस्या न्यूनीकरण गर्न विविध-नयाँ–नयाँ युक्तिहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ । एउटा स्वाभाविक युक्ति के हो भने केटाकेटीलाई त्यस्ता कथा सुनाइयोस् (र पढ्न शुरू गराइयोस्) जोसँग उनीहरू पहिलेदेखि नै परिचित छन् र जो उनीहरूलाई लगभग कण्ठस्थ भइसकेका छन् । अर्को युक्ति हो— कथाको शब्दावली सीमित होस्; केटाकेटीले नजानेका शब्द त्यसमा नपरून् । यस क्रममा, अक्षर र ध्वनिका बीच रहेको सम्बन्धका बारेमा उनीहरूको ध्यानाकर्षण गर्न सक्दा पनि फाइदा हुन सक्छ ।
अन्य जटिल कौशलहरूमा जस्तै, ‘पढ्न’ सिकाउने प्रक्रियामा पनि यसका निम्ति आवश्यक सबै पक्ष, अंग, विमर्श, कोचिङ, अभ्यास आदिमा जोड दिइन्छ । तर, यी समग्र क्रिया र प्रक्रियाको मूल्यांकन त केटाकेटीमा कुरा बुझेर पढ्ने क्षमता कति विकसित भयो भन्ने कुराले नै हुने हो । त्यसैले, पढ्ने प्रक्रिया अन्तर्गतका ससाना कौशलमा प्रवीणता हासिल गर्नु–गराउनुलाई ‘पढ्न’ सिकाउनुको उद्देश्य मान्न सकिंदैन । यो त वास्तविक उद्देश्य प्राप्त गर्ने एउटा मार्ग मात्र हुन सक्छ । सबै ससाना कौशलमा दक्षता र सन्तुलन कायम गर्दै समग्रमा ‘कुरा बुझेर पढ्न सक्ने हुनु’ नै यसको वास्तविक उद्देश्य हो । किनभने, ‘पढ्नु’ भनेको यही हो ।